Ndị a bụ ndị njikwa okwuntughe kacha mma nke 5 iji chebe gị | Akụkọ akụrụngwa
Ụlọ Ignatius | | Mobiles, Kọmputa, software
Ọnụ ọgụgụ ndị na-eji ekwentị eji arụ ọrụ n’ connectntanet akparịala ndị na-eji kọmputa arụ ọrụ. Mana dika ngagharị ndị ọrụ abawanyela, otu a ka ọ dịkwa ihe egwu na egwu nke anyị nwere ike ihu kwa ụbọchị site na iji ọrụ favoritentanetị kachasị amasị anyị.
Kwa afọ, ndị isi ụlọ ọrụ nche na-achịkọta ndepụta nke ha gosiri anyị, maka afọ iri na asatọ n'usoro, okwuntughe kachasị eji eme ihe ka bụ otu, na ebe anyị na-ahụkarị n'etiti ọnọdụ mbụ paswọọdụ 1234567890, paswọọdụ, 11111111 na Yiri , Ọ dị mfe icheta okwuntughe mana nke ahụ tinyere nchekwa dijitalụ anyị n'ihe egwu. Iji zere nke a, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ iji a njikwa paswọọdụ.
Iji otu okwuntughe ahu maka webusaiti anyi ji eme ihe abughi ezigbo ihe ngwọta, ma obu mmeghe nke otutu ndi oru na eme. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịchekwa 100%, ihe kacha mma anyị nwere ike ime bụ mepụta igodo dị iche maka ọrụ weebụ ọ bụla nke anyị na-enweta, paswọọdụ nke a ga-enwerịrị mkpụrụ edemede asatọ, gụnyere nọmba, mkpụrụedemede (mkpụrụedemede ukwu na nke nta) na ụfọdụ mkpụrụedemede ndị ọzọ pụrụ iche.
Ihe a niile dị mgbagwoju anya ma ọ bụghị naanị na ọ ga-ewe anyị ogologo oge, mana anyị ga-achọkwa ịme ihe ncheta iji nwee ike icheta igodo ndị ahụ ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịkọwa anyị. N'ụzọ dị mma, enwere ụfọdụ ngwa na-enye anyị ohere iwepụta okwuntughe, okwuntughe dị iche iche nke ọ bụla n'ime ọrụ anyị na-enweta site na Internetntanetị. site na kọmputa anyị ma ọ bụ site na ekwentị anyị.
Ana m ekwu maka ndị njikwa okwuntughe, ngwa ọ bụghị naanị iwepụta okwuntughe dị iche iche iji chedo data anyị na ịntanetị, kamakwa Ha na-ahụ maka ịchekwa ha, ka anyị wee leba anya na ya, anyị nwere ike ịnweta ọrụ Internetntanetị anyị chọrọ n’ebughị ụzọ tinye aha njirimara na paswọọdụ ahụ, na-enye anyị ihe dị mma nke na-atọ anyị ụtọ ruo ugbu a.
N'ihi ngwa ndị a, anyị ga-emecha kwụsị iji otu okwuntughe nke ọ bụla n'ime ọrụ ịntanetị anyị na-eji eme ihe mgbe niile. Typesdị ngwa ndị a na-eji a AES-256 nchedo nzuzo, yabụ ọ bụrụ na ndị enyi si n’èzí nwere ike ịnweta data anyị, ha ga-eji afọ ole na ole na-achọ ịnweta data ahụ.
Tupu ịhọrọ nke kacha mma paswọọdụ njikwa, a ghaghi iburu otutu ihe n'uche, ebe ọ bụ na ọ bụghị ngwa niile dị na nyiwe niile, na ndị na-anaghị enye otu nsonaazụ ma ọ bụ nhọrọ niile, n'ihi ụfọdụ adịghị ike nke ụfọdụ sistemụ arụmọrụ. N'ebe a, anyị na-egosi gị ndị nwere njikwa paswọọdụ kacha mma maka iOS, Android, Linux, macOS na Windows.
1.1 1Password ndakọrịta
2.1 LastPass ndakọrịta
3.1 OneSafe 4 ndakọrịta
4.1 Dashlane ndakọrịta
5.1 RememBear ndakọrịta
1Password bụ otu n'ime ndị njikwa okwuntughe mbụ dị na ahịa na afọ ole na ole, ọ nwere ịgbasa ọnụọgụ ọrụ ọ na-enye anyị. Ọ bụghị naanị na ọ na-enye anyị ohere ịchekwa okwuntughe, kamakwa ọ na-enye anyị ohere ịchekwa ikikere ngwanrọ, nọmba nọmba ụlọ akụ na kaadị kredit, kaadị iguzosi ike n'ihe ...
1Password na-enye anyị ohere depụta ozi ahụ niile gaa n'ụdị dị iche iche, nke mere na mgbe anyị na-achọ paswọọdụ nke email Gmail anyị, anyị ga-aga na ụdị ahụ. N'ụzọ dị otú a, a na-enye iwu ma nye nkọwa niile ozi niile. Mgbe a bịara na ịmekọrịta data anyị na ngwaọrụ ndị ọzọ, 1Password na-enye anyị ohere ịme ya site na iCloud (n'ihe banyere ngwaahịa Apple) ma ọ bụ site na Dropbox.
1Password na-enye anyị ụdị ndebanye abụọ. Onye ọ bụla maka $ 2,99 kwa ọnwa, nke na-enye anyị ohere iji ngwa niile ọ na-enye anyị maka usoro ndụ dị iche iche na ezinụlọ, nke maka $ 4,99 kwa ọnwa, na-enye ndị otu 5 otu ezinụlọ ohere ịkekọrịta n'ụzọ onwe ha, okwuntughe anyị na-eji n'ụbọchị.
1Password ka ebuputara na mbu ihe Apple kere, mana otutu afo o na abawanye ma taata dị na desktọọpụ niile na nyiwe mkpanaka ma e wezụga Linux, ịbụ onye nke kasị mma ngwaọrụ nke ụdị a mgbe niile nwere anyị okwuntughe mma.
1Password - Paswọdu Managerfree
Budata 1Password maka Mac na Windows
Ọzọ nke nnukwu njikwa paswọọdụ bụ LastPass, a ọrụ yiri nnọọ na nke anyị nwere ike ịhụ na 0Password na-enye anyị ohere kọmputa niile ozi anyị na-echekwa na a ngwa dị iche iche ige yabụ na ịchọghị ịchọ site na ngwa ahụ. Ngwa a, dị ka ọtụtụ ụdị a, na-enye anyị ndọtị maka ngwaọrụ mkpanaka nke anyị nwere ike mepee ngwa ahụ ka ọ na-akpachapụ anya na-ejuputa mpaghara ndị dị mkpa na weebụ ebe anyị jikọtara.
Dị ka 1Password, LastPass na-enyekwa anyị usoro ndebanye aha kwa ọnwa kwa afọ iji nwee ike ichekwa okwuntughe na ọrụ anyị na-eji ma mgbe niile ma mgbe ụfọdụ, dị ka nọmba nke ikikere ngwanrọ, kaadị iguzosi ike n'ihe ... ...gwọ ndenye aha onye ọrụ bụ naanị 2 dollar kwa ọnwa. Mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ezinụlọ ahụ dum rite uru dị na ya, anyị nwere ike ịhọrọ maka ndenye aha ezinụlọ na naanị $ 4 kwa ọnwa, na-enye anyị ikikere 6.
LastPass bụ ngwa kachasị mma iji jikwaa ozi ịntanetị anyị ma ọ bụrụ na anyị na-eji sistemụ arụmọrụ dị iche iche eme ihe, ebe ọ bụ na ọ dị maka ya Windows, dịka maka Mac, Linux yana maka gam akporo, iOS na Windows Phone. Mana na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ndọtị maka Firefox, Chrome, Opera na ọbụlagodi Maxthon.
LastPass Paswọdu Managerfree
LastPass Paswọdu Manager
Budata LastPass maka Windows, Mac, Linux
Onye nrụpụta OneSafe bụ otu n’ime mmadụ ole na ole rue taa ịhọrọbeghị usoro ndenye aha, usoro nke ọ bụghị ndị ọrụ niile na-ahụ ọchị, yabụ ọ bụrụ na ị nọ n’otu ndị ọrụ ahụ, OneSafe nwere ike ịbụ ngwa ị na-achọ. Site na OneSafe anyị nwere ike ịnwe n'otu ọnụ ọgụgụ nke kaadị akwụmụgwọ anyị, koodu PIN nke kaadị na ịnweta ụlọ ọrụ, ọnụ ọgụgụ nke akaụntụ akụ, data ụtụ yana aha njirimara na okwuntughe nke weebụsaịtị anyị gara. emegharịrị.
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ naghị enye anyị ọtụtụ nhọrọ ịhazigharị dịka a ga - asị na anyị nwere ike ịchọta na ngwa ndị ọzọ dịka 1Password ma ọ bụ LastPass, OneSafe na-enye anyị nhọrọ ndị dị mkpa nke onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịchọ kwa ụbọchị iji nweta okwuntughe weebụsaịtị gị mgbe niile, yana ozi ndị ọzọ ị kwesịrị ịchebe mgbe niile. Dịka ọ bụghị ngwa nke na-arụ ọrụ n'okpuru ndenye aha maka afọ abụọ ma ọ bụ atọ, onye nrụpụta ahụ wepụtara ụdị ọhụrụ nke anyị ga-akwụ ụgwọ ọzọ, mana n'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị ọnụ ala karịa ịkwụ ụgwọ ndenye aha.
OneSafe 4 ndakọrịta
OneSafe na-enye anyị naanị nkwado maka Apple na Google mobile ecosystems, yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ngwa a site na Windows ma ọ bụ Linux PC ma ọ bụ site na Mac anyị, OneSafe abụghị ngwa anyị na-achọ.
otuSafe | njikwa paswọọdụ
Developer: Ụlọ ihe nkiri Lunabee
oneSafe + paswọọdụ njikwa4,99
Ọ bụrụ na anyị ejiri otu ngwaọrụ iji jikọọ na Internetntanetị, ọ bụrụ ama, mbadamba ma ọ bụ kọmputa, Dashlane bụ nhọrọ kachasị mma dị ugbu a na ahịa, ebe ọ bụ na Ọ bụ kpam kpam free ma ọ bụrụ na anyị na-eji a na ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ọnụọgụ ahụ gbasaa, ihe nwere ike, anyị ga-aga na ndenye aha, ndebanye aha nke nwere ọnụahịa nke 39,99 euro kwa afọ, ọnụahịa kachasị elu nke ihe niile anyị nwere ike ịchọta n'ụdị ngwa a.
Ekele Dashlane anyị nwere ike ịchekwa data nnweta anyị, nọmba akaụntụ, nọmba kaadị kredit n'otu ebe, mepụta ndetu nchedo, tinye ihe onyoonyo nke onwe ... ka ihe niile ozi nke kwesiri ka echedo ya bụrụkwa mgbe niile
Dashlane, tinyere LastPass, bụ ihe ọzọ nke nyiwe na-enye anyị ihe ngwa maka Windows, Mac na Linux, yana, doro anya, maka ngwaọrụ mkpanaka.
Dashlane - Paswọdu Manager
Budata Dashlane maka Windows, Mac na Linux
Otu n'ime ndị bịara ọhụrụ na ahịa njikwa paswọọdụ bụ RememBear, ọrụ obe-ikpo okwu nke dị ugbu a enwere n'efu maka nbudata na nyiwe niile, Ebe ọ bụ na ọ dị na beta, ma n’oge ahụ ọ naghị enye anyị sistemụ ndenye ọ bụla iji nwee ike ịnụ ụtọ uru niile ndị ọbịa ọhụụ a na-enye anyị.
RememBear bụ ọrụ na-enye anyị obere nhọrọ ma a bịa na ịchekwa data anyị ebe ọ bụ na mgbakwunye na ịhapụ anyị ịchekwa data nbanye anyị, ọ na-enyekwa anyị ohere ịchekwa nkọwa nke kaadị akwụmụgwọ anyị, inwe ike ịgbakwunye nọmba ngwa ngwa mgbe anyị chọrọ ịzụta ihe na throughntanetị.
RememBear dị maka Mac, iOS, Windows na gam akporo. Mana na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ndọtị maka Chrome, Firefox na Safari, iji nwee ike ijikwa n'ụzọ dị mfe nnweta weebụsaịtị nke anyị kwakọbara data nnweta na mbụ.
RememBear: Paswọdu Managerfree
RememBear: Paswọdu njikwa na echekwa obere akpa
Budata ihe ncheta maka Windows na Mac
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na n ’ịntanetị anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-achịkwa okwuntughe, ekpebiri m ilekwasị anya ihe a kacha mara amara, iji zere ịdaba na njehie nke karia ihe kariri. Ndị njikwa okwuntughe niile a anọwo na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ na nchekwa na solvency ha na-enye anyị bụ nke niile ezi uche.
Iji dokwuo anya, nke bụ nhọrọ kachasị adọrọ mmasị na usoro nke ndị njikwa okwuntughe dị ugbu a yana na anyị tụlere n'isiokwu a, n'okpuru m gụnyere otu tebụl na ndakọrịta na sistemụ arụmọrụ dị iche iche, ma ọ bụ mkpanaka ma ọ bụ desktọọpụ.
N'ihi na ihe nchọgharị
1Password Si Si Mba Si Si Mba Si
OneSafe Si Si Mba Mba Mba Mba Mba
Dashlane Si Si Mba Si Si Si Si
Icheta Si Si Mba Si Si Mba Si
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » The kacha mma paswọọdụ oru
Izu na-abịa ị nwere ike ibudata PUBG n'efu na Xbox One
Ngwaọrụ gam akporo dakọtara na Fortnite